Otu esi etinye ihe nchọgharị Vivaldi na Linux Mint 20 - LinuxCapable
October 12, 2021 October 12, 2021 by Jọshụa James
Bubata igodo na ebe nchekwa Vivaldi GPG
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ya Vivaldi Browser na Linux Mint.
Iji wụnye Vivaldi nke ọma, ị ga-achọ ịwụnye ngwugwu ndị a; gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ị maghị; ọ gaghị emerụ gị usoro.
Ugbu a ibubatala ebe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike itinye Vivaldi ugbu a site na iji ihe ndị a.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Vivaldi 4.3.2439.44 stable
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ogwe ọrụ> Ịntanetị> Vivaldi. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Vivaldi, ibe ọdịda na-esote ga-ekele gị iji hazie ihe nchọgharị gị.
Ị ga-enwe usoro ihe dị ka ibe ise nke nhọrọ ntọala ngwa ngwa iji hazie ahụmịhe Vivaldi gị. N'ozuzu, ọ ga-ewe 1 ruo 5 nkeji na kacha, dabere na ole customizing ị ga-amasị ime.
Ozugbo emechara, ị ga-ahụ ibe ọdịda ikpeazụ, ma ị dị mma ịga nchọgharị.
Ekele, ị rụnyela Vivaldi Browser nke ọma na desktọpụ Mint Linux gị.
sudo apt-get purge --autoremove vivaldi-stable
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mwepụ.
Mara na nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla etinyere na Vivaldi Browser na sistemụ Mint Linux gị.
Na-esote, ị ga-achọ iwepu ebe nchekwa na sistemụ gị. Oge a ị na-agbakwunye ọkọlọtọ "r"., nke na-enye ntụziaka iji wepụ ntinye. Iwu a dị ka ịgbakwunye ebe nchekwa ahụ dịka i mere na mbụ.
Iji wepụ ebe nchekwa kwụsiri ike:
sudo add-apt-repository -r "deb [arch=i386,amd64] deb https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main"
Ozugbo emechara ebe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike wepu igodo GPG etinyere na ndepụta igodo gị ka ịga n'ihu.
Enwere ike ime nke a nke mbụ site na ịdepụta igodo dị na sistemụ gị.
Ka ịchọta igodo maka Vivaldi Browser site na ndetu dị n'elu, lelee ọnụọgụ na mkpụrụedemede n'usoro ogologo. Na ihuenyo, nke a bụ “790D 2E26 8F67 FE01 3B32 76D3 793F EB8B B697 35B2″. Iji wepụ igodo GPG na sistemụ gị, rịba ama mkpụrụedemede 8 ikpeazụ nke igodo ahụ, wee mee iwu na-esonụ ka ihichapụ igodo ahụ.
sudo apt-key del key-ID
sudo apt-key del B69735B2
Mara, gbaa mbọ hụ na enweghị oghere n'etiti ọnụọgụ koodu na mkpụrụedemede.
Dịka ị chọpụtala, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ igodo GPG. Jiri otu usoro ihichapụ igodo. Ma nke ahụ bụ ya, ị wepụrụ Vivaldi Browser kpamkpam na sistemụ Mint Linux gị.
Ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Vivaldi na nkuzi wee wụnye ihe nchọgharị weebụ.
N'ozuzu, Vivaldi bụ ezigbo mma ọzọ na Firefox na Google Chrome, na onye isi ya bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na Brave Browser. Agbanyeghị, Vivaldi nwere atụmatụ ndị ọzọ, Brave na-elekwasịkwa anya na nzuzo nke ndị ọrụ ya. Ihe ọhụrụ maka Vivaldi bụ njirimara njikwa taabụ; site n'ịhọrọ ọtụtụ taabụ, ị nwere ike tinye ha na "nchịkọta," nke na-echekwa ezigbo ala na ụlọ ahịa na taabụ. N'otu oge na nchịkọta, enwere ike "tiiled" taabụ, nke pụtara na ekewa mpio ihe nchọgharị n'etiti taabụ, na-ahapụ gị ka ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ibe weebụ n'otu oge.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Nchọgharị Vivaldi Mail igodo
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na AlmaLinux
Otu esi etinye Opera Browser Stable, Beta, ma ọ bụ Onye Mmepụta na Linux Mint 20